GoSquared: Real-oge nchịkọta na Data | Martech Zone
Ọ bụrụ na ị nụbeghị GoSquared, ọ na-arụ ọrụ na weebụsaịtị 30,000! Ahịa GoSquared n'onwe ya dị ka nke kachasị mfe, kachasị mfe iji nchịkọta mgbe. Ọ bụghị naanị na ha na-achọ iji anya nke uche ahụ nchịkọta data na ọkwa ozo, data n'onwe ya bu nke gi site na API ha siri ike. Ebumnuche GoSquared iji nye gị ihe niile ịchọrọ na ntanetị.
Akụkụ dị mkpa nke nchịkọta GoSquared:
Ugbu a Dashboard - GoSquared si nchịkọta ikpo okwu na-achota na inwere ike ihu uzo okporo uzo ma mee ngwa ngwa. GoSquared na-egosi gị ihe na-eme na saịtị gị na ezigbo oge.
Trends - GoSquared tinye igodo metrik gị na gburugburu. Ndị ọbịa, na-arụsi ọrụ ike oge na saịtị, ọnụego bounce na ndị ọzọ.
Nchịkọta ndị ọbịa - Nchịkọta ndị nleta GoSquared karịrị graf na eserese iji gosi gị ndị mmadụ na saịtị gị, ịgụ blọọgụ gị na iji ngwa gị.
Social - GoSquared nwere uko mwekota na elu na-elekọta mmadụ na netwọk dị ka Twitter, Facebook, Pinterest na ọbụna Dribbble maka ndị na-emepụta ihe.
Akụkọ kwa ụbọchị - GoSquared na-enye nchịkọta nke arụmọrụ gị nyefere na igbe mbata gị kwa ụtụtụ.
ìgwè - Ekekọrịta otu nke otu site na ụbọchị mbụ. Kpọọ mmadụ niile nọ n’òtù gị ka ha jiri GoSquared - Onye isi ala, ndị mmepe, ndị na-ese ihe na ọbụna ahịa, onye ọ bụla nwere ike ịkọwa ahụmịhe ha.
njikọ aka - GoSquared jikoro ndị ọbịa aka iji ghọta oge ndị mmadụ na-eji agụ, ịpịgharị, pịnye, na mmekọrịta gị na saịtị gị, yabụ ị ga - ahụ ụdị ọdịnaya na - arụ ọrụ.
Onye Mmepụta API - Iwuli visualisations data, ọdịnaya-agbanwe integrations, na omenala dashboards kwere omume na API GoSquared.
GoSquared gụnyekwara a arụpụtara WordPress ngwa mgbakwunye maka nbudata.